La kulan 5 nooc oo cusub oo aysan aheyn in laga waayo maktabaddaada | Abuurista khadka tooska ah
Saacad kasta oo dhaafta, way dhacayaan in ka badan 20.000 oo naqshadood oo adduunka ahWaxay u muuqan kartaa xoogaa la buunbuuniyey, laakiin dhab ahaantii waxay u badan tahay in tirada naqshadaha ay aad ugu dhow yihiin xaddigaas. Iyo tirada shaqo ee la qabanayo awgeed, waa laga maarmi karin in la dareemo u baahan tahay in la hirgeliyo ilo cusub oo kala duwan gudahood, tan iyo dhamaadka, qaab qoriddu waxay noqotaa mid aad muhiim u ah waxayna muhiimad weyn ku leedahay fulinta dhamaan mashaariicda, taas oo ah wax aan la inkiri karin.
1 Sidee il wanaagsan ugu dari karaa qiime mashruuc?
2 5ta nooc ee cusub ee ay tahay inaadan dhaafin
2.1 Coves sansan
2.3 Playlist bilaash ah
2.4 Nabadoon san
2.5 Nooca Zero Typefac
Sidee il wanaagsan ugu dari karaa qiime mashruuc?
Si loo bilaabo, waa in la yiraahdaa runti waa wax lala yaabo sida ilo wanaagsan ama dhinacyada qaar ay ugu fududdahay sida meel u dhexeysa xarfaha, waxay maareeyaan inay si togan u saameeyaan sida dadku u dareemaan naqshadaynta qaarkood.
Doorashada farta saxda ah badanaa waxay kala duwanaanaysaa in akhristayaashu akhriyi doonaan nooc ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo in kale, taas oo macnaheedu yahay inaad haysato suurtogalnimada inaad wax walba aad uga fududayso adoo dooranaya farta ugu fiican ku habboon qaabeyntaada.
Iyada oo maskaxda lagu hayo, ujeedka maqaalkani maahan wax aan ka aheyn inaan kugu hago ilahaas kuwaas oo ka dhigaya akhristayaasha waxyaabaha aad ka kooban tahay ama shaqadaada inay dareemaan wanaag, sidaa darteed shaki la'aan waxay u qalmaan in lagu daro maktabaddaada.
Ilaha cusub dhexdooda, kuwaas oo waxay leeyihiin qaab dhismeed aad u wanaagsanMarka lagu daro inaad waxtar badan leedahay si wax walboo aad ugu fududaan mashruucaaga soo socda, waxaa jira shan aan hoos ku xusi doono, hase yeeshe iyo ka hor inta aan la sameyn, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso taas waa inaadan waligaa iloobin xaqiijinta shatiga mid kasta oo ka mid ah ilahaas, haddii ay tahay ilo loogu talagalay isticmaalka ganacsiga oo keliya ama haddii ay si fudud loogu isticmaalo shakhsi ahaaneed
Hadda, iyada oo aan wax kale lagu darin, waxaan dhihi karnaa noocyada cusub waxay siin doonaan qiimo weyn mashaariicdaada naqshadeynta taasna waa inaan laga waayin maktabaddaada gudaheeda waxay noqon doontaa waxyaabaha soo socda, haddaba fiiro gaar ah u yeelo.
5ta nooc ee cusub ee ay tahay inaadan dhaafin
Ku habboon cinwaanada iyo astaamaha; wuxuu leeyahay 2 pesos oo labaduba ah geesinimo sida iftiinka.
Gebi ahaanba bilaash ah adeegsiga shakhsi ahaaneed iyo ganacsi ahaanba.
Waxaa loo isticmaali karaa ujeeddo kasta, ha ahaato mid ganacsi ama mid shaqsiyeed. Ma yahay weyn ee kaararka salaanta, casuumaadaha arooska, boorarka, iwm ...
Waa far nabadeed oo raaxo leh oo loo adeegsan karo si kasta.
Nooca Zero Typefac
Waa a joomatari font, oo loo isticmaalo marka la sameynayo glyphs, "M" iyo "W".
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » La kulan 5 nooc oo cusub oo aysan aheyn in laga waayo maktabaddaada